Sex For Myanmar မြန်မာအောကားများ Home
Sex For Myanmar မြန်မာအောကားများ Age 18+ Male Only
ဒီမှာကြည့်နေလို့ ကြာရင်တော့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ဒေါင်းယူသွားလို့ရပါတယ် ..
လိုးတဲ့ပုံ၊ စောက်ဖုတ်ပုံနဲ့ လိုးကားတွေကို sexformm@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်. ပေးပို့သူရဲ့ အချက်အလက်တွေ မပေါက်ကြားဖို့ အာမခံပါတယ်
ဂိမ်းလေးနဲ့ ချိန်းပြီး လိုးကြမယ်.
ချိန်း လိုးတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ.. Online နဲ့သုံးရပါတယ်.. ကောင်မလေးတွေကို ချိတ်ပြီး လိုးလို့ရပါတယ်. ကောင်မလေးတွေကလည်း ချိန်းပြီးလိုးနိုင်ပါတယ်. 3D အပြည့်အဝနဲ့မို့ အပြင်မှာ လိုးသလိုပဲ ဖီးရှိတယ်..
အောက်ဆုံးက လင့်မှာ apk လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပြီး Install လုပ်လိုက်..
ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်. ကိုယ်က ယောက်ကျားလေးလား၊ မိန်းကလေးလား. ရွေး..
ယောက်ကျားလေးရွေးပြီးရင် ကိုယ်က လိုးမယ့်ကောင်လား၊ နှစ်ဖက်ချွန်လား၊ အခြောက်လား ရွေး
ပြီးရင် အသက် 18 နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီချက်ကို အမှန်ခြစ်ပြီး Play ကိုနှိပ်လိုက်..
ဒီကိုရောက်သွားမယ်.. OK ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Game Play ထဲကိုရောက်သွားပြီ.. ဒီအဆင့်မှာ ကောင်မလေးနဲ့ ချိန်းပြီး လိုးလို့ရတယ်.. ဒါပေမယ့် Guest user ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်.. ကိုယ့်အကောင့်နဲ့ကိုယ် ဝင်လို့ရအောင် ဘယ်ဘက်အပေါ်နားလေးက Sign Up ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး အကောင့်ဖွင့်မယ်..
ဒီအကွက်မှာ ဖြည့်စရာရှိတာ ဖြည့်ပေါ့. နာမည်တူနေရင်တော့ မတူတဲ့နာမည်ကို ရှာ.. ပြီးရင်တော့ Sign up ကိုနှိပ်.
ကိုယ့်အကောင့်ထဲကိုဝင်သွားပြီ.. ဘယ်ဘက်အပေါ်နားလေးက ကိုယ့်နာမည်ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ကိုယ့်အချက်အလက်တွေ ဖြည့်လို့တယ်.. မဖြည့်ရင်တော့ ပုံတွေဘာတွေ မပေါ်ဘူးပေါ့.. သြော်. မေ့လို့ Coin လေးတွေ ပေါ်လာရင် ကောက်ထားနှော်.. နောက်ဆို တန်ဆာပလာတွေဝယ်လို့ရတယ်... ဘယ်လို လိုးရမှန်းမသိသေးရင် လေ့ကျင့်လို့ရတယ်.. ဘယ်ဘက်က My room ကိုနှိပ်လိုက်.. ပြီးရင် ညာဘက်မှာ Kate ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုရွေးလိုက်.. Chat Box မှာ Chat လို့လည်းရသေးတယ်.. ပြီးရင် အနီကွက်လေး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ပေါ်လာတာကိုနှိပ်ပေး.. သူနဲ့ တစ်ချီလောက် လိုးလိုက်အုံး.. သဘောပေါက်ပြီဆို ဆော်လေးတွေရှာရအောင်.. Search User ကိုနှိပ်.
ဘယ်ဘက်က Search User ကိုနှိပ်ပြီး ကောင်မလေးတွေကို ရှာလို့ရတယ်... အပေါ်က All Countries မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပြီးရှာလို့လည်း ရတယ်..
နိုင်ငံရွေးချင်ရွေး. OK. ပြီးရင် ကောင်မလေးတွေ တွေ့ရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်.. ကောင်မလေး လိုင်းပေါ်ရှိနေရင် အစိမ်းလေးပြတယ်.. ပြီးရင် Invite ကိုနှိပ်...
ကောင်မလေးက လက်ခံပြီဆို ကုတင်ပေါ်ရောက်သွားမယ်.. Chat Box ကနေ နည်းနည်းပါးပါး ပွားလိုက်.. အချို့ကောင်မလေးတွေက ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး.. ပြီးရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း လိုက်နှိပ်ပြီး လိုးကြပေတော့.. လူပုံတွေကို တစ်ချက်တစ်ချက်စီထောက်ပြီး မြင်ကွင်းပြောင်းလို့ရတယ်.. ကောင်မလေးတွေလည်း အကောင့်ဖွင့်ပြီး ချိန်းလိုးတတ်ကြတယ်.. ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့. လူလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး.. အာသာဖြေကြတာပေါ့လေ.. ပြီးခါနီးရင် ဘယ်ဘက်က တိုင်က အနီပြည့်သွားပြီး တိုင်အပေါ်က လရည်ပန်းနေတဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် ပြီးသွားတာပဲ.. ကြာကြာလိုးနိုင်ရင် Bonus ရတယ်.. အဲဒါလေးတွေ စုထား.. Store မှာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ဝယ်လို့ရတယ်.. Android အတွက် အောက်က လင့် (၂)ခု
Computer အတွက် အောက်က လင့် (၂)ခု
ကိုးရီးယား ဖီး အလန်းလေး
Shemale တွေ လိုးတာ.. Shemale တွေ လိုးတာ.. မိုက်တယ်. အခြောက်ဆိုပြီး အထင်မသေးနဲ့. လီးကြီးက နည်းတာမဟုတ်ဘူး.. ဖင်ပွင့်သွားမယ်..
ကောက်ရိုးပုံဘေးမှာ ပလွေဆွဲနေကြတာ.. လီးကြီးကလည်း နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး
လီးနဲ့တမျိုး၊ လက်နဲ့တမျိုး အပီဆွဲတဲ့ မြန်မာအတွဲ
Credit : ဒေါက်တာမလေး
အချိန်သိပ်မရလို့ ထမီလှန်ပြီး မတ်တပ်ပဲ လိုးလိုက်တယ်
Credit : ပန်းဆည်းဆာ
ဆတ်စလူးစိန်နဲ့ တုတ်ကြီး တွေ့တာ အားရှိပါးရှိပဲ
ကောင်းလိုက်တဲ့ဖင်.. ဖီးလေးနဲ့ လိုးနေကြတယ်
Credit : DKMXX
ကွယ်ပြီးလိုးတဲ့ မြန်မာအတွဲ. ချောင်းရိုက်လေး. မိုက်
ကွယ်ပြီးလိုးနေကြတဲ့ မြန်မာအတွဲလေး.. ကောင်မလေးက စုပ်ပေးပြီး တက်လိုးသွားတယ်.. အိုးကတော့ ကောင်းမှကောင်း
သစ်ပင်အောက်မှာ လိုးသွားတဲ့ မြန်မာအတွဲလေး. မိုက်တယ်
သစ်ပင်အောက်မှာ လိုးသွားကြတာ.. ကောင်မလေးက အပေါ်က.. ပြီးတော့ ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ပြန်ထွက်သွားကြတယ်.. မိုက်မှမိုက်
စောက်ဖုတ် ဒီဇိုင်း ( ၁၀ )မျိုး
မြန်မာအတွဲ ချောင်းရိုက်လေးပါ.. အပျိုစစ်စစ်. သွေးထွက်သွားတယ်
လိုးကားတွေ၊ စောက်ဖုတ်ပုံတွေ ပေးချင်ရင်တော့ sexformm@gmail.com ကိုပို့ပေးနိုင်ပါတယ်
Copyright © 2014 Sex For Myanmar မြန်မာအောကားများ